Mandrahona Hanakatona Ny Skype sy ny WhatsApp i Arabia Saodita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2013 8:25 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Español, Català, English, English
Mandrahona hanakatona ireo fitaovam-piseraserana malaza, tahaka ny Skype sy ny WhatsApp (tolotra fandefasan-kafatra amin'ny finday) i Arabia Saodita, Fahavalon'ny Aterineto, koa asa raha hanaiky hanohintohina ny fiainana manokan'ireo mpanjifa sy hanara-maso azy ireo ny orinasam-pifandraisana.
Brian Whitaker, mibilaogy ao amin'ny Al-bab, nilaza momba ireo manampahefana Saodiana fa:
mandrahoana hanakatona ny fampiasana ireo fitaovam-pifandraisana tahaka ny Skype, WhatsApp ary Viber, raha tsy hoe manaiky hanara-maso [hitsikilo] ireo hafatra sy antso ataon'ny mpanjifa angaha ireo orinasam-pifandraisana.
Nitatitra i Al-Arabiya fa nanome fe-potoana ho an'ireo orinasam-pifandraisana hatramin'ity herinandro ity ny Vaomieran'ny Teknolojiam-pifandraisana sy ny Fampahalalam-baovao (CTIC) mba hanome valin-teny.
Raha tsy mamaly ny fangatahan'i Arabia ireo orinasa, mety handray fepetra ny vaomiera ary hanakatona ireo tolotra ireo..
Arabia Saodita, Fahavalon'ny Aterineto araka ny tatitra navoakan'ny Reporters without Borders, mandrahona hanakatona ireo habaka malaza izy, toy ny Skype, WhatsApp.
Whitaker nanampy hoe:
“Raha sanatria ka milaza ireo orinasam-pifandraisana fa sarotra ho azy ireo ny hanara-maso ny fampiharana ireo, nampitandrina ny vaomiera fa handray fepetra hanakatona ny fampiasana ireo fitaovana manerana ny fanjakana.”
Nilaza ny gazety Arabo Jeddah fa sahirantsaina ireo manampahefana satria mampiasa fifandraisana voaaro ny fampiharana:
“Araka ny loharanom-baovao roa maripototra avy amin'ireo orinasam-pifandraisan-davitra ao an-toerana, lohahevitra lehibe noresahin'ireo mpitantana orinasam-pifandraisan-davitra sy ny mpikambana ao amin'ny CTIC nandritra ny 20 andro mahery ity olana ity. Niafara tamin'ny fitakian'ny CTCI ahafahana manara-maso ireo fampiharana mampiasa fifandraisana voaaro ny fihaonana.”
Araka ny efa nampoizina, nahita fomba hanamarinana ny fitakiany ny manampahefana fa hisorohana ny heloka sy ny fampihorohoroana ny anton'ny fanarahamaso. Saingy nanipika i Ahram Online, fa miahiahy momba ny firoboroboan'ny tambajotra sosialy izay mirongatra ao amin'ny aterineto ny konservativa ao amin'ny fanjakana, tambajotra izay tsy vitan'izy ireo fehezina sy “lasa lavitra tsy araka ny fetra napetraka tamin'ny fahalalaham-pitenenana”.
Whitaker nampahatsiahy antsika:
Ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia ny hahalalana raha hanaiky ny fitakian'ny CTCI ireo orinasa na tsia. Efa nisy olana tahaka izao tamin'ny telo taona lasa raha nandrahona hanakatona ny hafatra amin'ny BlackBerry ny CTCI raha toa ka tsy manome azy ireo ny teny miafina fidirana ny BlackBerry mba ahafahana mamaky na manara-maso ireo hafatra.
Voavaha ihany anefa ny olana, na dia tsy fantatra mazava tsara aza hoe tamin'ny fomba ahoana. Nilaza ny CTCI fa nanaisotra ny fandraràna nahazo ny Research in Motion, orinasa Kanadiana mitantana ny BlackBerry izy ireo, rehefa nanapa-kevitra “hanaraka” ireo fitsipika sasany notakiana ny orinasa. Nanambara kosa ny tatitra sasany fa nanaiky hametraka lohamilina (serveur) ao amin'ny firenena ity orinasa ity mba hahafahan'ireo Saodiana hiditra mivantana sy hahita ireo vaovao tsiambaratelon'ny mpanjifa .
Tao amin'ny habaka Riyadh Bureau, nitatitra i Ahmed Al Omran fa namariparitra ny Twitter ho sehatra fandaniam-potoana amin'ny tsy misy dikany ho an'ireo tanora sy “toerana fihaonan'ireo adala rehetra sy mpanakorontana mpandefa sioka tsy ara-dalàna, diso ary lainga” i Abdulaziz Al Sheik, lehiben'ny “pretra (mufti)” ao Arabia Saodita.
Al Omran nanampy hoe:
Nanjary nitsikera hatrany ireo mpisera Twitter ny Lehiben'ny pretra tato ato. Tamin'ny Janoary 2012, nilaza izy fa nanjary “sehatra famarotana fiampangana sy fampiroboroboana lainga ataon'ireo olona tsy manan-katao ny tambajotra sosialy.” Ary tamin'ny volana Oktobra, niantso ireo mpisera Twitter ho toy ny “olona adala” izy ary niampanga azy ireo ho tsy manana fanetre-tena sy fanantenana.
Nampahafantatra antontan'isa mikasika ireo mpisera Twitter ao Arabia Saodita ihany koa i Al Omran:
Nanjary sehatra tsy azo ialana amin'ny fifanakalozan-kevitra sy adihevitra politika ao amin'ny firenena ny Twitter. Nanambara ny fikarohana farany teo fa 51%n’ ny mpisera aterineto ao Arabia Saodita dia mpisera Twitter avokoa, voalohany manerantany. Niaiky ilay manamboninahitra Saodiana tamin'ny volana lasa teo fa manao izay ho afany ny governemanta mba hahafahany manara-maso sy manivana habaka noho ireo hafatra marobe alefan'ny mpiserasera ao amin'ny firenena.
Noho ny fivoaran'ny tambajotra sosialy, afaka mampahafatatra ny feony ao amin'ny aterineto ny Saodiana, manao izay ho afany kosa ireo manampahefana Saodiana mba hanampenam-bava azy ireo.